प्रधानमन्त्रीजी, मुटु नभएको को हो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
माघ ९, २०७६ डा. रामेश कोइराला
यसै पनि म जनता हुँ, र थप, म मुटुको उपचार गर्ने कर्म गर्छु । तसर्थ मलाई थरीथरीका मुटुबारे थाहा हुनु स्वाभाविकै हो । मकहाँ आआफ्ना मुटुको हालत के–कस्तो छ भनेर जँचाउन आउनेको मात्र हैन, सहकर्मीहरूमार्फत अन्य महानुभावको मुटु (र त्यसैका आधारमा सामान्यतया मन पनि) को हालतबारे पनि मलाई धेरथोर जानकारी भइरहेकै हुन्छ ।
नयाँ आएका मुटुबारे सोधखोज गर्ने हाम्रा आफ्नै तरिका हुन्छन् र सोही अनुसार आवश्यक जाँचहरू गरेर मुटुको अवस्था निर्क्योल गरिन्छ ।
र, केही दिनअघि मेरो देशका प्रधानमन्त्रीले बडो भावुक भएर देशमा सरकारले गरेका राम्रा कामबारे लेख्दिने आफूले खोजेजस्तै मन र मुटु भएका सम्पादक नभेटेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएछ । मैले जनता, चोर, हत्यारा, नेता, सम्पादक लगायत सबैका मुटु छाम्ने मौका पाएको हुँदा मेरो अनुभव यता पनि काम लाग्न सक्ने देखेर स्वयं प्रधानमन्त्रीको मुटुको अवस्था कस्तो होला भनेर सोधखोज गरेको छु ।
स्वास्थ्य विज्ञान अनुसार, मुटु नभएको मानिस त जन्मनै सक्दैन । तसर्थ मुटु नभएका भन्नाले उहाँले आफूले चाहेजस्तो मुटु नभएका भन्न खोज्नुभएको भनेर बुझ्नुपर्छ । नेपाली विश्वास अनुसार, मन पनि भनिने मानिसको मुटु लगभग उसकै मुठीको आकारको हुन्छ । त्यसमा दायाँतिरका दुइटा कोठामा अक्सिजन कम भएको नीलो रगत बग्छ भने देब्रेतिरका दुइटामा फोक्सोमार्फत कार्बनडाइअक्साइड फालेर अक्सिजनले भरिपूर्ण भएको रातो रगत बन्छ । गर्भमै समस्या भएर कहिलेकाहीँ दुवैतिर उस्तै नीलो रगत बग्न पनि सक्छ भने कहिलेकाहीँ बहावमा अवरोध पनि आउन सक्छ । जन्मपछि पनि कहिले भल्व बिग्रेर त कहिले कुनै कोषले खान नपाएर समस्या भइराख्छ ।
अनि विज्ञानले मानवमुटुलाई फुल्ने र खुम्चिने प्रक्रियाका दुइटा पम्प एउटै ठाउँमा जोडिएको साधारण यन्त्र हो भनेर मात्र बुझ्छ । मुटुका दुवै पम्पका कामको एकअर्कामा तालमेल (सिंक्रोनाइजेसन) हुनुपर्छ र तिनले एकैनासले काम नगरे मुटु ‘फेल’ हुन्छ ।
हुन त दुई जना पाइलट मिलेर देशरूपी जहाजलाई आफ्नै तालले उडाइरहनुभएका यहाँहरूलाई थाहै होला, दुवै पक्षको समन्वय नभए जहाजको के हालत हुन्छ भनेर त, तैपनि भनूँ, अमेरिकी सहायता लिने कि नलिने भनेर भइरहेको गलफत्तीमा दलकै मुटुले राम्ररी पम्प गर्न सकिरहेको छैन । तपाईं विकास गर्ने पैसो अमेरिकाबाट आउनेछ भनेर हौसिइरहँदा अर्का पाइलट साम्राज्यवाद कि के वाद देख्दै छन् । तपाईंहरूकै मुटुका पम्पहरू चैँ ‘सिंक्रोनाइज्ड’ छन् नि ?
मलाई निर्मला काण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, सुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड वा बालुवाटारै काण्डका कुरा गरेर तपाईंलाई खिस्सी गर्ने मन छैन । मलाई त तपाईं नेकपा (क) को मात्र नेता नभएर राजनेता भएको हेरेरै मर्ने इच्छा छ । तपाईंलाई सत्तामा हुँदा र नहुँदाका बखत जन्मदिनमा शुभकामना दिने भीड र जनतामा भेद नै थाहा छैन वा त्यसमा रमाइरहनुभएको छ भनेर त कसरी मान्न सक्छु र ? छिमेकीको ५६ इन्चको छातीका तुलनामा तपाईंसँग पनि कमसेकम ६० इन्चको छातीभित्र एउटा ठूलो मुटु छ भन्ने मेरो मान्यतालाई कसरी गलत भन्न सक्छु र ? वचन पनि मनको विम्ब मानिन्छ । तपाईंका वचन सम्झाऊँ ? बयलगाडादेखि आँप झर्नेसम्म, सुपर झापालीदेखि गैँडासम्म, डल्ला फ्याँक्नेदेखि अलच्छिना सरकारसम्मका आफ्ना वचनको घृतछायामा आफ्नो शरीरभित्र कस्तो मन वा मुटु रहेछ भनेर कहिल्यै आफैँ सोच्नुभएको छ ?
बहुधा नेपाली ‘मलाई केही भएकै छैन’ भनेर मुटु गधाको जत्रै हुँदासम्म अपरेसन गर्न चाहन्नन् । घरबेटी बाबै र भान्से बाहुनले गरेका भ्रष्टाचारले छियाछिया पारेको भल्व लिक हुन थाले अपरेसन नै गर्नुपर्छ । यसरी भ्रष्टाचारीको अनुहारै नदेखेकाले तपाईं निर्धक्क हुनुभएको त हैन ? एक पटक इकोकार्डियोग्राफी गराउनुस्Ù के थाहा, भल्व नै फेर्ने दिन आइसकेको हो कि ?
तपाईंलाई सम्झाऊँ है, दुई वर्षअघि चुनाव जित्नेबित्तिकै हेलिकप्टर चढेर रसुवागढी पुग्नुभएको कुरो । दुई वर्षमा ‘उ:, यताबाट त्यता हुँदै चिनियाँ रेल काठमाडौँ पुग्छ’ भनेर सोझ्याएको औँलाले अझसम्म पनि मेरो नाक छुन्छ । कुस्मामा रेल स्टेसन हुने कुरोदेखि लुम्बिनी र पोखराका चुच्चे रेल, हनुमाननगरका पानीजहाज — कत्ति कुरा छन् है सम्झाउनुपर्ने ! सपना देख्न फाफुरालाई रत्नपार्कमै सुताए पुगिहाल्थ्यो नि, हामीलाई त काम चाहिएको थियो । काम गर्नुभो ? अँ, फ्याट्ट स्विच थिचेर घर–घरमा ग्यास भनेर विराटनगरमा गोबरग्यासमा पतन हुनबाहेक के चैँ गर्नुभो ? बाहुनीको पेट्रोलखानी जाने बाटो भनेर राखिएको साइनबोर्ड देख्दा तपाईंको मन लज्जाले पानी–पानी हुन्न ? अझ त्यसैलाई महान् उपलब्धि भन्दै गर्दा तपाईंको मुटु कामेन ? त्यस्तो पानीआन्द्रे र कमजोर मुटु लिएर अर्काको मुटुको साइज खोज्ने ? मुटुमा ह्याउ खोज्ने ?
म अलिअलि लेख्छु पनि । नेपाली भाषामा ‘मुटु हुनु’ र ‘उदार हृदय’ हुनु उस्तै विम्ब सुनिए पनि साहित्यिक लवजमा भन्ने हो भने फरक बुझाउन पनि सकिन्छ । देशलाई सर्वोपरि ठानेर ‘सर्वजन हिताय’ गर्ने मानिसलाई उदार हृदयको भन्न सकिन्छ भने जिउँदै मानिसलाई गिँड्ने, काट्ने वा भट्टामा पोल्ने ‘दुस्साहस’ भएकालाई ठूलो मुटु भएका भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ । यस अर्थमा तपाईंको मुटु कुन वर्गमा पर्छ र तपाईंले खोजेका मुटुहरू कस्ता हुन् भनेर अझप्रस्टसँग भन्दिनुभए ती सम्पादकहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो नि ! यसै पनि तपाईंलाई थाहा भएकै कुरो हो, कलेजको डिग्रीले मात्र बुद्धि पलाइदिन कहाँ सक्दो रहेछ र ? तर एउटा कुरो नि, प्रशंसा सुन्न फगत कान भए पुग्छ भने आलोचना सुन्न मुटु नै चाहिन्छ । सम्पादकसँग त्यसको अभाव हो वा आफैँसँग भनेर गुनासो गर्नुअघि सोच्नु नै भएको थियो होला ।
पहिल्यै थालिएका र स्वत: कुनै न कुनै दिन पूरा हुने मेलम्ची वा जनकपुरको रेल तपाईंकै शासनकालमा पूरा हुँदा ‘ई, मैले गरेँ’ भनेर छाती खोली हावाले भरिएको यामानको नक्कली मुटु देखाएकैले जनताले ‘वाह ! क्या दिलदार !’ भन्दिन्छन् भन्ने सोच्नुभएको हो ? हाम्रा गाउँमा एक जना रामनाथ गुरु हुनुहुन्थ्यो । गाउँघरतिर सार्वजनिक चौतारो वा मन्दिर जे बने पनि अन्तिमको इँटा हाल्ने बेला टुप्लुक्क आइपुग्ने अनि भोलिपल्टदेखि ‘मैले गर्दा फलानो मन्दिर बन्यो’ भनेर सधैँ र सबैतिर भन्दै हिँड्ने बानी भएका । तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, हाम्रा गाउँलेले त तपाईंमा तिनै रामनाथ गुरुको आत्मा सरेको शंका गर्न थालिसके भनेर ?
तपाईं अहोरात्र देशको समृद्धिका लागि खटिरहनुपर्ने मान्छे । केही महिनाअघिसम्म दैनिक बीस घण्टा त तपाईं देशलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो । र पनि देश सोचेजस्तो अगाडि बढेको पाइएन भनेर पनि गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर आजकल त तपाईंलाई हप्तामा दुई दिन डायलायसिस गर्नुपर्छ । थप आठ–दश घण्टा देशका लागि काम गर्न नसक्ने हुनुभएको छ । फेरि डायलायसिस नगरे रगतमा पोटासियमको मात्रा बढेर मुटुको गतिमा गडबडी हुनसक्छ । गति कम भए पेस मेकर पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ । तपाईं हाम्रो आशाको केन्द्र हुनुहुन्छ, त्यसैले यस्ता कुरामा अलिक सजग रहनुहोला भन्ने अनुरोध पनि छ ।
आजका दिनमा तपाईं तीन वर्ष यस देशलाई हाँक्ने पदमा बसिसक्नुभयो । देशका अरू भागभन्दा तपाईंलाई पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र प्यारो होला । त्यही दमकमा स्तरीय त छाड्दिनुस्, सरकारी अस्पतालधरि छैन नि ! ढुकुरपानीमा भ्युटावर र बडेमानको मूर्तिमा गर्व गर्न बेफ्वाँकमै सरकारको अर्बौं रुपैयाँ खन्याउँदै गर्दा कहिल्यै सोच्नुभो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भनेर ? त्यता कुनै सरकारी स्कुल वा कलेजबाट जनतालाई स्तरीय शिक्षा दिलाएर निजीको भर हटाउनुभो ? एउटा कुरा सम्झाऊँ, बरु अरूको मुटुको उति वास्तै नराख्ने गिरिजाप्रसादले तीन वर्षभित्रै धरानको बीपी र भरतपुरको बीपी अस्पताल खोल्ने सबै काम गरिसकेका थिए ।
बजारमा सञ्चार विधेयक त सामाजिक सञ्जाल नियमनको विधेयकबारे बग्रेल्ती असन्तोषका स्वरहरू सुनेर मेरो देब्रे छाती अलिक चसक्क गरिरहेको छ । ऐन बनेर मेरो त्यो छातीभित्र भएको मुटुमै प्रहार नगरोस् भनेर अलिक हतार–हतार म आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई उहाँकै मुटुबारे प्रश्न गरिरहेछु । हुन त उहाँले अरूलाई गर्न मिल्ने प्रश्न जनताले पनि गर्न मिल्नुपर्ने हो । कि त मुटु देब्रेतिर भएकाले गर्न नमिल्ने भनेर लेख्नुपर्‍यो । अँ, साँच्ची, सरहरूको मुटु त भए पनि देब्रेतिर नै छ नि ? केहीको त दाहिनेतिर पनि हुन्छ भनेर यकिन गर्न खोजेको, अन्यथा हैन नै ।
भनिन्छ, लोकतन्त्रमा पत्रकारिता स्थायी प्रतिपक्ष हो र यो स्वतन्त्र रहनुपर्छ । त्यसरी नै अधिनायकवादी सरकारलाई आफूसँग असहमति राख्ने विचारहरू पत्रपत्रिकामा आएको फिटिक्कै मन पर्दैन । अनि देशको प्रतिपक्षी राजनीतिक दल मस्त सुतेका बेला जाबा सात–आठ जना सम्पादक त छन्, सरकारका बेथितिबारे यस्सो लेख्दिने ! असहमतिका विचारहरू कहिलेकाहीँ लेख्दिने ! बाँकी बग्रेल्ती त तपाईंकै प्रशंसाको पुल बाँधेर कहिले युरोप त कहिले चीनतिर घुमेका फोटा राखिराख्छन् त । कि यहाँले तिनलाई पत्रकार नै मान्नुहुन्न ? हुन त स्तुति गाउन पालिएका भाटलाई कुन चैँ राजाले भारदारी विद्वान् ठानेका थिए र ? भर्खरै बालुवाटारको सरकारी निवासमै पत्रकारमध्ये आफ्ना दल समर्थकलाई बोलाएर मुठी उज्याउन लगाई शपथ खुवाउँदा तिनका छाती चिरेर भित्र चियाउनुभएकै थियो होला । उहिले हामी दमक बस्दा बजारको बजरंगीको सैलुनमा हनुमानले छाती चिरेर देखाउँदा त्यहाँ राम र सीता भेटिएको तर मुटु नभएको एउटा ठूलो पोस्टर थियो । याद छ नि ? ती बालुवाटार–शपथीहरूकै जस्तो छाती चिरेर ती केही थान सम्पादकभित्र खासमा हेर्न चैँ के खोज्नुभएको हो ?
मास्क लगाएपछि हतपती मान्छे चिनिँदैन । तर मुटु कस्तो र कत्रो छ भनेर नजानून् भनेर मास्क लगाउन उचित हुन्न । अनि आजकल त मास्क यसै पनि जनताले लगाउन छाडिसके । तर पनि तपाईं मास्क लगाएर अझ मेरो मुटु त कसैले देखेकै छैन भन्ने भ्रममा बसिरहने नै हो ? भ्रमले शासकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भनेर अन्दाज गर्न त त्यो असलहरूले मात्र देख्ने ‘दैविक पहिरन’वाला कथा पढ्नुभएकै होला ।
साँच्चै, यी दुई वर्ष प्रशंसायोग्य कुन चैँ काम गर्नुभो ? आहुतिले भनेझैँ, चीनले बनाइदिएको कोटेश्वर–कलंकी सडक उद्घाटन गर्नबाहेक अलिक गर्व गर्नलायक केही छ ? अब ‘पोलपोलमा आएको समृद्धि देखिनस्’ नभन्दिनुहोला, प्लिजÙ त्यस कुरामा प्रशंसा गर्न छातीभित्र मुटु हैन, भक्ति चाहिन्छ ।
तपाईंले आफ्नो अहिलेसम्मको कार्यकालमा सरकारी नियुक्ति कतै दल नहेरेर गर्नुभो ? भागबन्डाका ती दुई आयोगबाहेक कुनै कतै उदाहरण छ ? कतै दल नहेरी सक्षमताका आधारमा नियुक्ति दिनुभो ? भारदारले भनेका भरमा दल नमिलेकाहरूलाई सकेसम्म बरखास्त गर्न खोज्नुभएन र ? दल त के, आफ्नै गुटको हुनुपर्छ भनेर संसदलाई नै महिनादिनसम्म बन्धक बनाउँदा कुनै दिन आफूभित्र चियाउनुभयो, मुटु र मन कस्तो र कत्रो रहेछ भनेर ? उहिले देशभक्त वा सक्षम हुनलाई सोभियत संघमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पहिलो मापदण्ड मानिन्थ्यो । सायद चीनमा अझ पनि होला । तपाईंको पनि यो देशमा देशलाई माया गर्ने हुन वा काम गर्न सक्षम हुन पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनैपर्छ भन्ने दर्शन हो ? तपाईंको चित्त यत्रै हो ? हो भने आफ्नो मन पनि अलिक फराकिलो बनाउन नसक्नेले अर्काको मन र मुटुबारे कमसेकम गुनासो त नगर्दिनुस् !
केही वर्षदेखि देखिआएको कुरो हो, आफू सत्तामा हुँदा र नहुँदा दुर्घटनालाई तपाईंले फरक आँखाले हेरिरहनुभएको छ । हरेक मृत्युमा सबैभन्दा पहिला मनमा त्यो मेरो कार्यकर्ता हो वा होइन भनेर आउँछ भने त्यो पाषाण हृदय हो । अनि तपाईंलाई थाहै होला, ढुंगाको चैँ साँच्चै मुटु हुन्न ।
भारतले नक्सामा हाम्रो भूमि समेटेर राखिसकेपछि के गर्नुभो ? हो, छिमेकीले त्यो जमिनको भोगचलन उहिल्यैदेखि गरेको थियो रे । तर हालसाबिक गरेर त्यो जमिन आफ्नोमा पारेको त तपाईंकै पालामा हो नि ! कसैले नसुनेको फोनमा गुनासो गर्नुभो भनेर पत्याउँ कि केही नसके म पनि आफ्नो सो भूमिलाई आफ्नै देशमा राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्छु भनेर सुर्रिनुभो ? हुन त जाबो नक्सामा त कोर्ने ‘जिगर’ नभएकासँग मुटुको के खोजीनिती भो र ?
हुन त तपाईंजस्ता विद्वान्लाई यति कुरो के थाहा नहोला र, तैपनि फेरि दोहोर्‍याऊँ, तपाईंले यतिलाई सरकारी जमिन ‘नियम मिलाएर’ दिँदाका दिन तपाईंको मन उदार भएको देखिए पनि त्यो उदारता देखाउने मनकै मुटु चैँ त्यही दिन निकै नेपालीले खुम्चिएको पाए । जनताले तपाईंलाई राज्यको सम्पत्तिको सुरक्षा र सुव्यवस्था गर्न पठाएका हुन्, न कि मनलाग्दी गर्न । हो, यहाँ चैँ तपाईंको नीलो रगत बग्ने कोठाहरू मात्र भएको आधा मुटु भेटिन्छ ।
नसरुद्दिनको कथा पढ्नुभएको छ नि ? लिनु र दिनु शब्दको चक्करमा इनारबाट बाहिर निस्किन नचाहने कृपण मुल्लाको ? तपाईंले मेरो यो कुरो मानेनन्, त्यो कुरो दिएनन् भनेर गुनासो गर्दा कहिल्यै सोच्नुभो, मैले चैँ के दिएँ, जसको उनीहरू प्रशंसा गरून् भनेर ? हो, मेरामा जँचाउन आइपुगेका सम्पादकहरूका पनि ठूला मुटु छैनन् । कहिले चन्द्रागिरि त कहिले बैंक, कहिले एनजीओ त कहिले विमान र कहिले विमानस्थलले तिनीहरूको पनि इमानमा अलिअलि खोट लाइसकेकै बुझिन्छ । उनीहरू पनि जनताले सोचेजति स्वतन्त्र रहेनछन् । तर अझ पनि तिनका साँघुरिएका मुटुमा चैँ रातो र नीलो रगत बग्ने चारै कोठा बाँकी रहेछन् है !
तपाईंलाई थाहै छ, जनताले सदा तपाईंलाई पत्याइरहे । तपाईंका एकपछि अर्का मन्त्री अक्षम हुँदा पनि, तपाईंबाट निगाह भई नियुक्ति पाएकाहरू खत्तम निस्किँदा पनि तपाईं सदा चिप्लो माछाजस्तै हरेक अपजसबाट उम्किइरहनुभयो । थाहै होला, पानीमा बाँच्ने माछाको मुटुमा दुइटा मात्र कोठा हुन्छन् ।
अरू त छाड्दिनुस्, सभामुखको उम्मेदवार चयनमा पनि अलिकति आफ्नै मुटु नियाल्न मन लाग्नुपर्ने हो । सक्षमताको परिभाषा फगत को कुन गुटको र को कोसँग कति नजिक छ भन्ने बनाउँदा सामान्य मुटुलाई त अलिकति धक लाग्नुपर्ने हो । हुन त अर्का अध्यक्षले भनेजस्तै भ्यागुते छलाङले समृद्धि ल्याउन लम्पसार परेका मुटुहरूका बारेमा के कुरागराइ भो र ? अँ, भ्यागुताको मुटुमा जम्मा तीन वटा मात्र कोठा हुन्छन् है !
एउटा गुह्य कुरो भनूँ, ‘बिकिनी किलर’ भनेर कुख्यात भएको चार्ल्स शोभराजको मुटु औसतभन्दा ठूलो थियो । यस्तै मुटुको पो खोजीमा हुनुहुन्थ्यो कि ? हैन भने पनि आफूसँग माखाको पित्तजत्रो मुटु र मन भएपछि अर्कासँग भँगेराकै जत्रो मुटुको चाहना हुनु पनि अस्वाभाविक हो । छाड्दिनुस् के, भो नखोज्नुस् ठूलो मुटु ! फेरि एउटा कुरा भनूँ, झिँगाको शरीरमा हाम्रोजस्तो मुटु नै हुँदैन र त्यसलाई मार्दा निस्किएको रातो झोल पनि अर्कालाई चुसेको रगत मात्रै हो ।
बरु अस्तिका दिनदेखि मलाई तपाईंले भनेजस्तो, कसैको डरभर नमानी लागेको कुरा भन्न र गर्न सक्ने मुटु त कमरेड दीपक मनाङेको पो छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ । तपाईंहरूले जारी गरेको आचारसंहिता तात्तातै छँदै उनले जे गरे, त्यो दण्डनीय होइन भने, मननीय वा अनुकरणीय केही त पक्कै होला । वा, कुनै दिन मुलुकमा यतिपत्र वा अरू कुनै नाममा पत्रिका निस्किएला र त्यहाँ मुटु भएका पत्रकार र सम्पादक भेटिएलान् । शुझकामना !
ट्वीटर : @raameshkoirala
प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०८:३०
माघ ९, २०७६ किशोर नेपाल
केही समयअघि निरञ्जन कोइरालासँग बौद्ध महांकालस्थित उनको निवासमा भेट्दा उनले सोधेको एउटा प्रश्नले मलाई झस्काएको थियो । निरञ्जनको प्रश्न सोझो थियो, ‘समकालीन नेपाली समाजमा बीपीको स्थान के छ ? के उहाँ अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय हुनुहुन्छ ?’ मैले निरञ्जनलाई जवाफ दिएको थिएँ, ‘बीपी नेपाली समाजमा अहिले पनि सर्वप्रिय हुनुहुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सर्वमान्य नेता ।
नेपालका गाउँघरका साधारण मानिसलाई पनि उहाँको नाउँ कण्ठ छ । कांग्रेस भनेपछि जनताले उहाँलाई नै सम्झिन्छन् र चिन्छन् । बीपी नेपाली समाजसंग जोडिनुभएको छ ।’
यतिबेला कोइराला परिवारका प्रमुख प्रतिनिधि सदस्य हुन्, निरञ्जन । उनी दिल्ली, गोवा र काठमाडौंमा बस्छन् । काठमाडौंमा चाहिँ कहिलेकाहीं मात्र ओर्लिन्छन् । स्वर्गीय केशवप्रसाद कोइराला र कांग्रेसकी महिला नेत्री स्वर्गीय नोना कोइरालाका जेठा सुपुत्र निरञ्जन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य तथा पूर्वसांसद शेखर कोइरालाका दाजु हुन् ।
निरञ्जनले किन मसँग यो प्रश्न गरे ? यो मेरालागि आश्चर्यजनक विषय थिएन । उनीसँगको मेरो चिनजान लामो र घनिष्ठ छ । हामीबीच प्रेमभाव छ । उनको र मेरो पनि युवावस्थामा हामी मिलेर केही समाजवादी पाठ्य सामग्री तयार गरेका थियौं । बीपी कोइरालाको सैद्धान्तिक दृढता, समाजवादी चिन्तन र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताबाट प्रभावित थिए उनी । हामीबीच त्यतिबेलाको सम्बन्ध अहिले पनि यथावत थियो । निरञ्जनलाई थाहा थियो, द्वन्द्वकालमा म टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँथेँ । नेपालका ७५ जिल्ला र महत्त्वपूर्ण गाउँमा गएर जनतासँग प्रत्यक्ष कुरा गर्ने र देशमा स्थायी शान्तिको सम्भावना खोज्ने काममा म लागेको थिएँ । शान्तिपूर्ण ढंगबाट राज्यको रूपान्तरण कसरी हुन्छ ? यो मेरो खोज थियो । दुर्भाग्य, त्यो खोज खोज नै रह्यो । राज्यको रूपान्तरणको प्रयत्नमा देशका प्रमुख दलहरूले कुनै सरोकार राखेनन् ।
निरञ्जनको प्रश्नको गूढ आशय बुझ्न मलाई समय लागेन । नोना कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि कोइराला निवासमा एक प्रकारको राजनीतिक रिक्तता छाएको थियो । राजनीतिमा लागेको भए निरञ्जन सफल राजनीतिज्ञ हुन्थे होलान् । उनले त्यसमा मन लगाएनन् । तैपनि आफ्नो कुल र परिवारको चिन्ता त सबैलाई लागिहाल्छ । उनलाई लाग्यो होला, अब कोइरालाहरूको पारिवारिक विरासतको राजनीति कसरी चल्छ ? उनको प्रश्नको अर्थ यो पनि हुनसक्छ कि पछिल्लो समय जति पनि परिवर्तन भयो, नेपालमा त्यसको मूलकर्ता त कान्छा काका गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुन् । विद्रोही माओवादीसँग साहसिक सम्झौता उनैले गरे । आन्दोलनको माध्यमबाट राजालाई भंग गरेको संसद पुन:स्थापित गर्न बाध्य तुल्याए । संक्रमणकालीन समयमा राजाको कार्यभार आफैले सम्हाले । संविधानसभाको चुनाव गराए । संविधानसभाको निर्णयबाट राजालाई सधैंका लागि विदा गरे । नेपाल संसारको नवीनतम गणतान्त्रिक देशका रूपमा स्थापित भयो ।
जीवनको पछिल्लो चरणमा परिवर्तनका लागि यति धेरै काम गरेका गिरिजाप्रसादका अगाडि बीपी कोइरालाको के विरासत होला ? आखिर जे चमक हुन्छ, त्यो शक्तिमा नै हुन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यत्रो प्रभाव भएको बेला बीपी कोइरालालाई कसले सम्झेला र ? यो सबैको मनमा खेल्ने प्रश्न हो । तर समय निर्मम हुन्छ । ‘गणतन्त्रका पिता’का रूपमा पूजित हुनुपर्ने नेता गिरिजाप्रसादले औपचारिक सम्मान त पाएका छन् । तर त्यो सम्मानमा रौनक छैन । जनताबाट पाउने अथाह स्नेह उनको भागमा परेको छैन । त्यसका हकदार अहिले पनि बीपी कोइराला नै हुनुहुन्छ । भलै, राजा महेन्द्रले सेना लगाएर प्रधानमन्त्रीका रूपमा बन्दी बनाइँदा उहाँको समर्थनमा एउटै जुलुस निस्किएन वा प्रदर्शन भएन । यो अलग प्रश्न हो । राजाको हातमा बन्धक परेको देशलाई लोकतान्त्रिक उन्मुक्ति दिन बीपी कोइरालाले पछिल्लो समय लिनुभएको रणनीति प्रभावकारी भयो ।
कांग्रेसका साधारण कार्यकर्ताहरूले बीपी कोइरालाको विकल्पमा कोही अर्को नेता पनि हुनसक्छ भन्ने सोचेको देखिएको छैन । अहिले कांग्रेसको सत्ता ओगटेर बसेका शेरबहादुर देउवाको संस्थापन पक्ष र रामचन्द्र पौडेलको प्रतिपक्ष यो विवादमा पर्न चाहेको छैन । यो सत्य हो, माओवादीलाई पेलेरै जानुपर्थ्यो भन्ने नेताहरूको कमी छैन, कांग्रेसमा । माओवादीसँगको सहमति र सहकार्यमा ल्याइएको धर्म–निरपेक्ष राज्य, गणतान्त्रिक राष्ट्रको अवधारणाका विपक्षीहरू पनि धेरै छन् । कांग्रेसको अहिलेको समस्याको चुरो यही हो । समाज छ्यालब्याल भइसकेको छ । राजनीतिमा परिवर्तनका संवाहक भनेर चिनिने युवा वर्गको पकड बढ्दो छ । तर यसका कथित नेतागण परिवर्तनका लागि तयार छैनन् । कांग्रेस सभापति देउवालाई सभापतिको कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु छ । देउवाका प्रखर विरोधी मानिएका रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो लगातारको पराजयको बदला लिनु छ । यस्तो हिसाबले राजनीतिक दल चल्न सक्दैनन् ।
कांग्रेसमा विरासतको प्रश्न अझै एक/दुई पुस्ता कायम रहने देखिन्छ । विरासतको राजनीति त्यतिबेला निरुत्साहित हुन्छ, जब सामान्य जनताले आफूले पत्याएका नेताले देखाएका सपना पूरा गर्ने ल्याकत भएका देशभक्त र इमानदार मानिसलाई नेतृत्व तहमा देख्न पाउनेछ । त्यस्ता व्यक्तिहरू नभेटिएसम्म कांग्रेसमा सुधार सम्भव हुँदैन ।
अहिले कांग्रेसको राजनीतिमा कोइराला परिवारका तीनजना सदस्य सक्रिय छन् । बीपी कोइरालाका कान्छा छोरा शशांक कोइराला कांग्रेसको योभन्दा अघिको महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । हिजोआज उनको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएको छ । उनी राजनीतिमा आफूलाई बीपीका कान्छा छोराका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न चाहँदैनन् । जे भए पनि उनको मूल कार्यसूची बीपीले व्याख्या गर्नुभएको समाजवादी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन नै रहेको छ । उनले आफ्नो कार्यक्षेत्र नवलपुर जिल्लालाई बनाएका छन् । तर उनको लोकप्रियताको दायरा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । उनी सकेसम्म धेरै कांग्रेस कार्यकर्ताको घर–आँगनमा पुग्न चाहन्छन् । पहिलेको नवलपरासी जिल्लामा नेपाली कांग्रेसका नामी नेता स्वर्गीय सूर्यभक्त अधिकारी परिवारको दृढ समर्थन छ, शशांकलाई । स्वर्गीय अधिकारी बीपीका कर्मठ अनुयायी थिए ।
विरासतका अर्का हकदार हुन्, डा. शेखर कोइराला । उनले देशको राजनीतिमा विद्यार्थीका रूपमा पनि र डाक्टरका रूपमा पनि प्रत्यक्ष संलग्नता राखेनन् । तर प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा उनको अप्रत्यक्ष संलग्नतालाई पनि गौण मान्न सकिँंदैन । उनी कालाजरका विशेषज्ञ डाक्टर हुन् । चिकित्सा सेवाको क्षेत्रमा मात्र होइन, शिक्षण संस्थानको व्यवस्थापनमा पनि उनको त्यतिकै प्रभावशाली भूमिका छ । धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारदेखि उपकुलपतिसम्मको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वहन गरिसकेका छन्, उनले । डा. शेखर प्रत्यक्ष राजनीतिमा हेलिएको त्यति लामो समय भएको छैन । माओवादीसँग सम्झौता वार्ताको क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै डा. शेखरलाई पनि खटाएका थिए । अर्धभूमिगत अवस्थामा सिकलेसमा रहेका माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुरामलाई बालुवाटारमा अवतरण गराउने मुख्य पात्र शेखर र सिटौला थिए । योभन्दा अघिल्लो संसदमा मोरङबाट निर्वाचित भएका शेखरले यो पटकको साम्यवादी छालको प्रतिरोध गर्न सकेनन् । अहिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पदबाट अपदस्थ गराएर ‘कांग्रेसलाई स्वच्छ छवि दिने’ योजनामा सक्रिय छन्,
डा. शेखर । यही सिलसिलामा उनी हरेक जिल्लामा दुई दिन बिताउने कार्यक्रम लिएर जिल्ला भ्रमणमा लागिरहेका छन् ।
बिरामी नभएकी भए सुजाता कोइरालाले आफ्नो आक्रामक शैलीले कोइराला विरासतमाथिको आफ्नो अधिकार र हकदाबी गर्ने थिइन् होला । गिरिजाप्रसादकी सुपुत्री हुन्, सुजाता । उनलाई उनका पिता गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्थे । तर समयले उनलाई साथ दिएन । सेना प्रमुख रुक्मांगद कटवाललाई पदबाट हटाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्णयलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्ट्याइदिएपछि प्रचण्डले राजीनामा गरे । त्यसपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारको उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा सुजाता कोइराला सरकारमा कांग्रेस पक्षको नेता बनिन् । पछिल्लो समय सुजाता निकै बिरामी भइन् । अहिले पनि उनको राजनीतिक तृष्णा मरेको जस्तो देखिँदैन । कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा उनले आफूलाई उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिन् भने पनि आश्चर्य हुने छैन ।
कोइराला विरासतको विवरण यही हो । कांग्रेस पार्टी अहिले जुन अवस्थामा देखिएको छ, त्यसलाई हेर्दा अहिलेका नेताहरूले अहिलेकै गतिविधिले यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने देखिँदैन । कांग्रेस केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको उमेर, राजनीतिक अडान, प्रतिबद्धता केही छैन । नेताहरूको नजर मात्र ‘पावर’ मा केन्द्रित रहेको छ । पार्टीभित्र र पार्टीबाहिर र अन्तरपार्टी भागबन्डाले पार्टीहरूलाई मात्र होइन, पद्धतिलाई नै ध्वस्त पारेको छ । यो त सबैले अनुभूति गरेकै विषय हो ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०८:२७